Ukugqitywa ngemini entle yangoMgqibelo kwakuthetha iintlungu kunye nokusweleka kwabagibeli baseAmtrak eMontana
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngololiwe » Ukugqitywa ngemini entle yangoMgqibelo kwakuthetha iintlungu kunye nokusweleka kwabagibeli baseAmtrak eMontana
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Namhlanje kusweleke abantu abathathu, ngaphezulu kwama-3 benzakala kuloliwe wase-Amtrak eMontana emva kweemoto ezine.
Uloliwe wase Amtrak waya eMiami kwisiphaluka esikufutshane neMobile, eAlabama, ebulala abantu abangama-47 nge-22 kaSeptemba ngo-1993. Ingozi eyabulala abantu abaninzi kwimbali ka-Amtrak, yabangelwa kukungakhathali komqhubi wenqanawa kunye neemeko zenkungu.
Kusweleke abantu abaliqela, i-50 + yenzakele namhlanje kuloliwe #Amtrak e # Montana
Uloliwe uphume endleleni esuka eChicago esiya eSeattle
Ubuncinci iimoto ezine zathotywa ngaphezulu
Isitimela sabakhweli sase-Amtrak esisebenza phakathi kweSeattle neChicago siphume ngomva kwemini ngoMgqibelo emantla mpuma eMontana, ngokweengxelo zosasazo zasekuhlaleni kunye nemidiya yoluntu.
Yayisisibhakabhaka esiluhlaza ngaphezulu kweMontana xa abakhweli abali-147 kuloliwe waseAmtrak baba ngamaxhoba okuphulukana nomgaqo. Abakhweli abaliqela basavalelekile.
Uloliwe waya ngasentshona waya eSeattle, wadlula phakathi kweHavre kunye neShelby zokumisa eMontana.
Uloliwe waphuma umgama malunga ne-1 yemayile ukusuka eJoplin, Montana, idolophu enabantu abamalunga nama-200.
Ingqina lokuzibonela lithumele ubuncinci iimoto ezine zancitshiswa kunye nakwindlela. Abaphenduli bokuqala bakwindawo.
Ngeli xesha kubikwa abantu abathathu abaswelekileyo kunye nokulimala okuninzi.
Ingozi yokugqibela enkulu ka-Amtrak yashicilelwa ngoFebruwari 4, 2018, eCasey, eSouth Caroline, xa uloliwe wadibana nokumisa uloliwe we-CSX.
Iingcali zokhuseleko zikwacebisa ukuba ukhethe isihlalo esijonge ngasemva xa ukhwele uloliwe. Kungenxa yokuba umntu ohleli apho mancinci amathuba okuba aphoswe phambili ngexesha lokungqubana. Oololiwe kunokwenzeka ukuba babethe into-ecaleni kunentloko okanye ngasemva.